kaviri shaft mota Latest mutengo yakapetwa shaft mota vagadziri
240 volt magetsi emagetsi ari kutengeswa
Vagadziri veYunivhesiti Double shaft mota, Crane Duty mota, Yemapombi, Double Shaft mota uye Imwe Danho reMagetsi Motors dzinopihwa neSogears.
China Double Shaft Motor inogadzira
Wagadzirira here kutenga yakapetwa shaft mota? Mhando dzakasiyana-siyana dzezvikamu zvitatu zvehuviri shaft mota sarudzo zvinowanikwa kwauri
Heano mamwe mifananidzo yereferensi yako.
Double Shaft mota AC Electric
Dual shaft AC mota ine giya bhokisi iyo inopa yakanaka torque uye rpm kuma low voltages. kaviri kupera shaft magetsi emagetsi 380V yakakwira torque 100kg dc motor dc square giya mota.
Double Shaft Fan / Blower mota
Motokari yeDC ine giya bhokisi rakasungirirwa pane shaft, iri mechanical commutated magetsi mota powered from directly directly (DC) .Motor ine 150 RPM plastiki Geared. AC magetsi maviri maviri mota yakagadzirirwa marine, mota, midziyo yekutsigira ivhu, migodhi.
UNIVERSAL DOUBLE SHAFT MOTOT
Iyi vhezheni ine 12V yakavharidzirwa DC mota ine hwakareba-hupenyu hwebhasoni mabhurashi akasanganiswa ane 31.25: 1 simbi. Isu tinotora uye tinokwanisa kuwana zvese zvakapetwa Shaft Blower Motors zveBard, Marvair uye zvimwe zvigadzirwa.
Heano Kune Akawanda EDZINOGARA SHAFT MOTORI Izvo zvauri kutsvaga
Heano akawanda akadzika mutengo, yakakwirira mhando mbiri shaft dc motors ine nepasirese. Kana iwe uchida kutenga inodhura 150 rpm mbiri shaft mota, sarudza 150 rpm mbiri mbiri shaft mota kubva pano. A "mbiri shaft mota" ine "maviri shafts" inobuda yemotokari kesi. Hollow-shaft motors 1 PM6/1PM4 - Rutsigiro Rutsigiro.
Kana iwe uine chero mibvunzo iwe unogona zvakare kutibata nesu, tichafara kukubatsira! Basa redu revatengi riri online zuva rese. Makore ekuziva mota yekugadzira mota ndeyekungokupa yakakwirira mhando uye yakasimba mota. Tsvaga pano Double Shaft mota, Vaviri Shaft Motors vagadziri.
Tsvaga uye uenzanise ese Nokia motors ane yakazara hunyanzvi tarisheni chete ku Viwanda matrix. Tine ese Nokia magetsi emagetsi motors katuratiki inowanikwa, General Sumo Horsepower: 20 hp Voltage: 410 volts Chikamu: 3 RPM: 1755 rpm Chimiro: 215TZ.
Kana chero zvigadzirwa izvi zviri zvako, tapota taura nesu! Isu takagadzirira uye tinotarisira kubatana kwedu. Isu tinotora mhando sekubatsira uye nemutengo wakaderera sekutendeseka.